Soomaaliya cashar maka baran kartaa wixii ka dhacay Kabul? | KEYDMEDIA ONLINE
Soomaaliya cashar maka baran kartaa wixii ka dhacay Kabul?
Dowladda Soomaaliya, waxa ay ka baran kartaa cashir muhiim ah waxa todobaadkaan ka dhacay Afghanistan, waxaana Madaxda Soomaaliya hor taalla dajinta qorshe isku filnaansho iyo soo afjaridda ku tiirsanannta AMISOM.
MUQDISHO, Soomaaliya - Qabsashada deg degga ah ee Daalibaan kula wareegtay guud ahaan gacan ku heynta Afghanistan, ayaa sababtay walaac ku aaddan in tallaabadaasi dhiirri-gelin karto kooxaha kale ee Islaamiyiinta ah ee ka dagaallama caalamka, sida Kooxda Al-Shabaab ee ka howl-gasha Soomaaliya.
Waxaa jirta filasho xooggan oo ku aaddan in haddii xoogagga caalamiga ah ee jooga Soomaaliya ay isku dayaan inay amniga ku wareejiyaan Dawladda Federaalka, ay dunidu arki karto soo noqoshada wixii ka dhacay Afghanistan.
Tan iyo Dec 5, 1992-kii, oo ku beegan maalintii ay ciidamada badda ee Maraykanka soo caga-dhigteen xeebta caasimadda Soomaaliya, iyaga oo watay magacii ahaa Hawl-galka Rajo Soo Celinta, (Operational Restore Hope), wuxuu dalku si dadban iyo si toos ahba ugu hoos jiray gacan amni shisheeye, marka laga yimaado xilliyo kooban, mana jirto tallaabo weyn oo loo qaaday amniga dalka.
Golaha nabadda iyo ammaanka ee Midowga Afrika ayaa dhidibada u taagay AMISOM, sanadkii 2007, iyadoo la siiyey fasax lix bilood ah inay kaga shaqeyso gudaha Soomaaliya, hayeeshee lixdaas bilood, waxa ay u diga-rogatay ku dhawaad 15 todon sano, (ilaa maanta).
AMISOM waxay hawlaha shaqo ee Soomaaliya kala wareegtay barnaamijka taageeridda nabadda ee Urur goboleedka IGAD (IGASOM) kaas oo lagu taageeri jiray nabadda iyo tababarada loo fidin jiray Soomaaliya.
In ka badan 14 sano oo AMISOM, ku sugan tahay Soomaaliya, marka la barbar dhigo 20kii sano ee Mareykan ku dagaalamayay Afghanistan, waxaa soo baxaysa natiijo isku mid ah, oo si weyn kaga fog qorshaha diyaarinta isku filnaansho amni.
Ciidamada AMISOM ayaa loo qorsheeyay in ay baxaan December 2021 kadib markii Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay (UNSC) ay kordhiyeen mudadii hore loo qabtay oo ahayd 28-ka Febraayo ee sanandkan.
Al-Shabab waxaa laga saaray Muqdisho 2011-kii, hayeeshee, kooxda ayaa wali fulisa qaraxyo iyo weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah. Waxay dhowaan ku hanjabtay inay carqaladeyn doonaan doorashooyinka Soomaaliya ee socda, iyagoo uga digay ergooyinka qabaa'ilka in ay ka qayb qaatan doorashada.